सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल-भारतबीच वार्ता हुने ! « News24 : Premium News Channel
सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल-भारतबीच वार्ता हुने !
काठमडाैं, २९ साउन । नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता हुने भारतीय सञ्चारमाध्यहरूले जनाएका छन् । आजतकले प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार दुई देशको विदेश मन्त्रालयबीच १७ अगस्ट अर्थात भदौ १ गते काठमाडौंमा वार्ता हुने छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले वार्ताकाे मिति नै उल्लेख गरेपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने वार्ताका कुराकानी भइरहेको तर मिति टुंगाे लागि नसकेके बताएकाे छ । वर्ताकाे मिति तय नभएकाले एजेण्डाहरु पनि तय भइनसकेको परराष्ट्रका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले जानकारी दिनुभयाे ।
नेपालले भारतसँग लगातार वार्ता मितिका लागि पहल गरेपछि भारतले भने काेराेनाभाइरसकाे कारण देखाउँदै पछि हटिरहेकाे छ । गत कात्तिकमा भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले लगातार दुईपटक परराष्ट्रसचिव स्तरीय वार्ताको पहल गरिसकेको छ ।